HomeTURKEYCoast Mediterranean33 MersinShirkadda Brand ee Ruushka
09 / 12 / 2019 33 Mersin, Coast Mediterranean, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Warqad Hordhac ah, TURKEY
shirkadaha dhoofinta ka soo Russia
In kasta oo noocyo badan oo gaadiid ahi maskaxda ku hayaan markay tahay gaadiidku, haddana habka ugu muhiimsan ee gaadiidku waa gaadiid raaca. Shirkaddayada, oo sanado badan ka waday howlo gaadiidleyda xamuulka ah ee gudaha iyo kuwa caalamiga ahba magaalooyin badan oo dalkeenna ah, waxay codsataa gaadiid badan oo waddooyin ah oo ku yaal Mersin Nakliyat. Shirkaddeena ayaa si firfircoon ula shaqeyneysa dhammaan 81 ee waddankeenna waxayna sameyneysaa shaqooyin wax ku ool ah dhammaan Yurub, Aasiya iyo waddamada Bariga Dhexe ee gaadiidka caalamiga ah. Shirkaddayada, oo ka mid ah waddammada ugu firfircoon safarka gaadiidka caalamiga ah, waxay awoodaa inay bixiso adeeg gaadiid oo ku filan iyada oo gawaadhi fara badan oo isugu jira dhoofinta iyo soo dejinta.
Dalkeenu sidoo kale wuxuu ku hawlan yahay howlaha lojistikada Maraakiibta lagu diro Russia Shirkadeena waa mid ka mid ah shirkadaha naadirka ah ee bixin kara adeegga gaadiid dhameystiran iyo qeyb ahaan gawaarida taarikada ee Turkiga iyo kuwa shisheeye waxayna bixiyaan adeeg gaarsiin dhameystiran dhammaan magaalooyinka Ruushka, magaalada caasimada ah ee Moscow, iyo dhameystirka adeegga gaarsiinta canshuuraha qeyb ahaan.
Shirkadeena, oo ka mid ah ururada naadiriga ah ee fuliya baaxad balaaran oo ganacsi caalami ah oo leh warqad oggolaansho xamuul xamuul, kaarka warbixinta gawaarida iyo caymiska cmr, waxay sidoo kale siisaa macaamiisheeda adeeg dhibaato la'aan ah meelaha ay ka midka yihiin gaadiidka cabirka culus, gaadiid qaboojiyaha iyo gaadiid qaadista. Sababta oo ah xaddidaadda daraasiinnada gawaarida Turkiga ee gaadiidka Ruushka, tiro dukumiintiyo xaddidan ayaa la baabi'iyey waqti gaaban, marka waa lagama maarmaan in la raaco gawaarida saxan ee shisheeyaha. Shirkadeena ayaa awood u leh inay abaabulo gawaarida ku filan si ay ugu daboosho farqigan iyaga oo wata gawaarida taarikada ee Ruushka ee ku xiran wakaaladeeda Russia.
kan adeega sida a adeegyada gaadiidka habboon in gaadiidka xamuulka by sharciyada waddooyinka ayaa saxiixay shaqo wanaagsan quruxsan of line Mersin Turkey-Russia Gaadiidka logistics, ayaa magac isu mashaariic badan oo uu qaadee. Shirkadaha iibka ee Russia Shirkadeena, oo sidoo kale leh cinwaanka shirkadda ugu sareysa ee loojistikada, ayaa ka jawaabeysa dhammaan codsiyada gaadiidka iyo hadalka ee macaamiisheeda waqtiga ugu gaaban ee suurogalka ah iyada oo koox hawleed qibrad leh oo kaashaneysa fahamka 7 / 24. dalabyo.
Cunto wargalin: Gaadiidka Konya